Dilkii Jamal Khashoggi, dacwad looga geeyay Premier League, xuquuq ganacsi oo ay lunsadeen iyo caqabadaha ka hor taagan maal-qabeenka Sucuudiyaanka inuu la wareego Newcastle – Gool FM
Dilkii Jamal Khashoggi, dacwad looga geeyay Premier League, xuquuq ganacsi oo ay lunsadeen iyo caqabadaha ka hor taagan maal-qabeenka Sucuudiyaanka inuu la wareego Newcastle
Haaruun April 29, 2020
(England) 29 Abril 2020. Wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi gabadhii uu la haasaawayay ayaa maamulka Premier League kula doodday in kooxda Newcastle United laga hor istaago u gacan galidda Sucuudiga.
Khashoggi oo ahaa warriye si xor ah kaga faallooda siyaasadda ayaa sanadkii 2018 lagu dhex dilay safaaradda Sucuudiga ay ku leedahay dalka Turkiga.
Dambi baarayaasha reer Galbeedka ayaa aaminsan in dhaxal-sugaha boqortooyada Saudi Arabia ee Prince Mohammed bin Salman uu amray dilka wariyihii carbeed, balse wiilka uu dhalay boqorka Sucuudiga ayaa dafiray sheekadaas.
Hay’adda Public Investment Fund ee uu hor kacayo Mohamed bin Salman ayaa doonaya inay iibsadaan milkiyadda kooxda Newcastle 80% (Siddeetan boqolkiiba).
Balse qareenno u doodaya Hatice Cengiz oo ah gacalisadii Khashoggi ayaa soo jeediyay in dowladda Ingiriiska ay hor istaagto in dhaxal-sugaha boqortooya Sucuudiga uu la wareego kooxda reer England.
Mike Ashley ayaa milkiyadda Newcastle iska leh tan iyo 2007, balse waxa uu suuqa soo dhigay sanadkii 2017, waxaana la rumeysan yahay in maal-qabeenka carbeed uu diyaar la yahay 300 milyan oo gini.
Balse waxa uu damacaas soo jeediyay baraarug kale oo liddi ku ah Sucuudiyaankan.
Dowladda Sucuudiga ayaa horraan lagu eedeeyay inay fududeeyeen xatooyada xuquuqaha ganacsi ee horyaalka Premier League, halka hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ay dhalleeceysay heshiiska sabab la xiriirta diiwaangalinta xuquuqaha aadanaha.
Intaas kuma eka e, dowladda Sucuudiga ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay isku dayayaan in sumcaddooda caalamiga ah ay ku hormariyaan maal-gashiga kooxaha waaweyn ama inay marti galiyaan dhacdooyin ciyaaro oo waaweyn.
Balse dowladda Saudi Arabia ayaa gaashaanka u daruurtay dhammaan eedeymahaas, waxaana ay sheegeen inay doonayaan in dadkooda uu si wanaagsan ula fal-galo isboortiga.
Qareennada u doodaya Ms Cengiz ayaa sheegay in warqad ay u gudbiyeen maamulka Premier League, iyadoo ka dalbatay in Mohamed bin Salman aan loo ogolaan la wareegidda kooxda Newcastle.
“Waxaad shaki la’aan xaq, mudnaan iyo ficil sharci ah u heysataan adiga (madaxa fulinta ee Richard Masters) iyo Premier League in qaadataan tallaabada hor istaagidda, qaas ahaan inaad toosh ku ifisaan dilkii arxan darrada ahaa ee loo geystay Ms Cengiz gacaliyaheedii,” ayaa ku qorneyd warqaddii ay qareenadda gabadha Turkiga ah u gudbiyeen maamulaha horyaalka Ingiriiska.
“Ma ahan inay boos ku yeeshaan kubadda cagta England dad galay falal sidan u gurracan” ayaa sidoo kale lagu yiri warqaddan.
Waxay qareennada ku doodayaan in dadkan galay dambiyada foosha xun ay doonayaan inay sawirkooda ku qurxiyaan kubadda cagta England, sidaas darteedna aysan habbooneyn in loo ogolaado inay ku lug yeeshaan ciyaaraha Ingiriiska.
Wariyahan qoraaga ah – kaasoo si xor ah u aaday dalka Mareykan sanadkii 2017- ayaa safaaradda Sucuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul tagay 2-dii October sanadkii 2018, isagoo raadinaya waraaqado si uu u guursado Ms Cegiz.
Dambi baarayaasha ayaa aaminsan in iyadoo bannaanka ku sugeysa, 59-jirkan la dilay, iyadoo raqdii meydka Khashoggi aanan dib loo arag.
Paulo Dybala oo markii afaraad laga helay Coronavirus muddo lix todobaad gudahood ah